गाउनभित्रै छिरेर पत्रकारले गुप्तांगको फोटो लिन खोज्दा….
फ्रान्स । सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना भएको छ फ्रान्समा । पत्रकारिताको मर्यादा विपरीत यूक्रेनका एक जना पत्रकारले यस्तो फोटो खिच्न कोसिस गरे, जुन कुरा सुनेर तपार्इंलाई पनि अचम्म लाग्छ । प्रसंग हो, ‘हाऊ टू...
अंगालो हाल्दै जन्मिए जुम्ल्याहा
एजेन्सी अमेरिकामा एक अनौठो जुम्ल्याहाको जन्म भएको छ । ओहियोस्थित एक्रोन जनरल अस्पतालमा सराह थिस्टलेटवेटबाट जन्मिएका जुम्ल्याहा बालिर्का हातेमालो गरेको अवस्थामा जन्मिएका हुन् । ‘मोनोएम्निओटिक’ भनिने यस्तो जन्म प्रति १० हजारमा एक हुने जनाइएको...
लामो लिंगका कारण विश्व रेकर्ड राख्ने नायक
न्यूयोर्क । अमेरिकामा एक यस्ता नायक छन्, जसको लिंग विश्वकै सबैभन्दा लामो छ । अमेरिकी अभिनेता जोना फाल्कनको लिंग १३ दशमलव ५ इन्च लामो छ । उनको लिंगसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि पोर्न फिल्मका एक...
एकै दिन ९ सय १९ जनासँग सेक्स सम्बन्ध
विश्वमा मानिसका आफ्नौ रुचि र र शोख हुन्छन् । यस्तै एक पोर्न स्टार छिन्, जसले एक दिनमा करिब एक हजार जनासँग सेक्स सम्बन्ध राखेर विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छिन् । एकै दिनमा बढी भन्दा...
नायिकाले गरिन् भूतसँग सेक्स
हलिउडकी एक अभिनेत्रीले अनौठो दावी गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेकी छन् । हलिउड नायिका नताशा ब्लासिकले आफ्नो एउटा टेलिभिजन कुराकानीमा आफूले दुई पटक भूतसँग सेक्स गरेको दावी गरेर सबैलाई अचम्ममा पार्नुका साथै आनन्द दिलाएकी छन्...
अमेरिकी युवतीको कुमारीत्व बिक्रीमा
पैसा र एडभेन्चरका लागि अमेरिकामा एक युवतीले आफ्नो कुमारीत्व लिलामीको घोषणा गरेकी छन् । उनले वेभसाइटमार्फत लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् । ३१ मार्चबाट सुरु भएको उनको यो अनलाइन लिलामी प्रक्रिया ७ मेमा सकिने...
स्तनपान गराएर व्यापार !
व्यापार गर्ने सबैको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ । व्यापार जसरी बढ्छ त्यसरी नै अघि बढाउनुपर्छ । पैसा कमाउन मान्छेले जेपनि गर्छ भन्ने उदाहरण एक व्यापारी महिलाले प्रदर्शन गरेकी छिन् । एक युवती एक समुद्री...
चोरीको रिभल्वर गुप्ताङ्गमा लुकाउने युवती पक्राउ
अमेरिकामा १९ वर्षकी युवतीलाई गोप्य अंगमा लोडेड रिभल्वर लुकाएको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ । Dallas-J.-Archer, डालास जे. आर्चस निलम्बित ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकेर सवारी चलाएको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन् । तर, महिला पुलिसले उनको शरिरमा...
देशका लागि सेक्स गरिदेउ: डेनमार्क सरकार
डेनमार्कले गिर्दो जन्मदर बढाउनआफ्ना नागरिकहरुलाई सजोडी विदामा जान आव्हान गरेको छ। सरकारले भिडियो बिज्ञापनमार्फत आफ्ना नागरिकलाई यो आग्रह गरेको हो । विदामा रहँदा जोडीहरुले एकअर्कालाई नयाँ ढंगले हेर्ने र सेक्स इच्छा जागृत हुने दावी...
पुरुषबाट महिला बनेकी युवतीको यो नखरा
संसारमा कैयौँ यस्ता महिला छन्, जो आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । त्यही चाहनाको पछि लागेर महिलाहरू अनेक प्रकारका सर्जरी गर्छन् र पानीसरी पैसा बगाउँछन् । ‘प्लास्टिक डल’को आकारको शरीर मन पराउने क्याटेला डेस...
सरकारमा दाबी गर्ने समय सकिनै लाग्दा तीन सांसद अपहरण
आन्तरिक उडान अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द
बहुमतको सरकारका लागि दावी आएनः राष्ट्रपति कार्यालय